October 2016 – Tips for refugees
Waxaa jira waardiye wanaagsan oo ka shaqeeya meesha aan deganahay. Wuu i caawiyaa wuxuuna ii fududeeyaa in aan wax baddan sameeyo. Laakiin shalay wuxuu si ku cel-celis ah u taabtay jirkayga. Anigu midaasi ma jeclaysan. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?
Waxaa dhici karta in aad is tiri
in waardiyaha uu adiga ku gaad-gaadayo.
Wuu ku caawiyaa wax baddan wuu kuu fududeeyaa in aad samaysid.
Waxaa dhici karta in uusan markale ku caawinin haddii aad ka dacwootid.
Ma garanaysid qofka aad arintaasi kala hadlaysid.
Haddii uu waardiyahu ku caawinayo midaasi waa asaga go’aankiisa.
Laakiin ma ahan mid wanaagsan haddii uu sameeyo wax aadan adigu jeclayn.
Waa adiga qofka go’aansanaya qofka adiga ku taabanaya.
Waxaa jira dad baddan oo ku caawin kara.
Adiga kaliya waxaad u baahantahay in aad u mahad celisid wax intaas ka badana majiraan.
Haddii uu qof u rabbo in uu si daacadnimo ah kuu caawiyo,
kuguma samaynayo wax aadan adigu jeclayn.
Way wanaagsantahay in aad qof kala hadashid arinta.
Waxaad la hadli kartaa shaqaalayaasha bulshada jooga meesha aad degantahay.
Ama la hadal dadka jooga xarunta la talinta.
Ka raadi tallo tooska boggagaan internetka:
Posted on October 18, 2016 October 20, 2016 Author editorialteamCategories Abuse/Harassment - Missbrauch/Gewalt
Aniga oo (13 sanno jir ah) waxaan dhiig ku arkay kastuumadayda hoosteeda. Miyaan Xanuunsanahay?
Waxay u badantahay in uu kugu dhacay ‘dhiigaagii’ ugu horeeyay.
Qaar kamid ah qoysaska iyo waddamada dhab ahaantii wayba u dabaal degaan arintaan.
Macnaheedu waxay tahay: in aad weynaanaysid.
‘In uu dhiigaaga kugu dhacay’ macnaheedu waxay tahay:
Dhiiga aad ku aragtay kastuumadaada wuxuu ka yimid xubinkaaga taranka ah.
Xubinka taranka wuxuu ku dhacayaa god yar oo ku yaala calooshaada.
Godkaan waxaa lagu magacaabaa raximka.
Waxaa jirta labbo ugxan oo ku xigta raximka.
Waxaa jirta tuubad faloobiyan oo ku taala inta u dhaxaysa ugxan kasta iyo raximka.
Ku dhowaadkii halmar bishii ukun aad u yar ayaa laga soo daayaa ugxanta waxayna aadaa tooska tuubada faloobiyanka.
Hadda waxaad noqonaysaa qof uur leh.
Si kastaba, si ay arintaan u dhacdo, waa in aad galmo la samaysid nin ama wiil dhallinyaro ah.
Laakiin adiga weli aad ayaad uga yartahay arintaasi.
Kadibna, ukunta waxay noqonaysaa mid ‘laga bacrimiyo’ minadiisa midaasna macnaheedu waxay tahay in aad uur qaadaysid.
Ukuntu waxay ku weynaanaysaa gudaha raximka.
Intiiba aadan uur qaadin dhiiga wuxuu ka imaanayaa xubinkaaga taranka.
Laga bilaabo hadda ku dhowaadkii halmar bishii ayaa laga soo daynayaa dhiiga gudaha raximkaaga.
Waxay qaadanaysaa maalmo yar.
Waxaad ka heli kartaa shukumaano nadaafad ama suufafka dhiiga laga xirto dukaamada ama farmashiyaha.
Waxaad ku xiraysaa shukumaanada nadaafada gudaha kastuumadaada.
Waxaad gelinaysaa suufafka dhiiga gudaha xubinkaaga taranka.
Weydii gabar aad saaxiibo tihiin ama hooyadaada haddii ay ku caawin karaan.
Mararka qaar waxaad la kulmi kartaa dhiig soconaya muddo dheer ama waxaad arkaysaa xanuuno daran.
Haddii ay midaan dhacdo waa in aad la tashataa dhakhtarkaaga.
Posted on October 18, 2016 March 29, 2017 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Anigu waxaan ahay 16 sanno jir. Dhakhtar ayaa i weydiiyay haddii aan qabbo HIV ama AIDS. Maxaa laga wadaa HIV? Maxaa laga wadaa AIDS?
HIV iyo AIDS waa labbo shay oo kala duwan.
HIV waa fayras.
Fayras ku dhuunta jirkaaga kaana dhiga in aad xanuunsatid.
AIDS waa cudurka keena fayraskaan.
Haddii aad ku qabtid jirkaaga HIV muddo dheer, waxaa kugu dhacay cudurka AIDS-ka.
AIDS-ka wuu ku dili karaa haddii aanan lagaa daawaynin.
Waxaa jira daawooyin fiican oo la dagaalama fayraska HIV.
Daawooyinkaan waxay yareeyaan tirada fayraska HIV ee kujira jirkaaga.
Si aadan ugu daaran qofkale fayraska HIV.
Adigana kuugu dhicin cudurka AIDS.
Waxaad noolaan kartaa muddo dheer marka aad qaadatid daawooyinkaan.
Dalka Jarmalka adigu ma ahan in aad bixisid lacagta daawooyinkaan.
Caymiskaaga caafimaadka ayaa bixin doona lacagta daawooyinka loogu talogalay fayraska HIV.
Dadka qabba fayraska HIV waxay go’aansan karaan qofka ay rabaan in ay u sheegaan.
Sharcigu wuxuu ka mamnuucayaa dadka in ay dadka kale banaanka la baxaan.
Ka taxadir una hoggaansan arimahaan soo socda:
Galmo hala samaynin qof kale adiga oo aan isticmaalin kondom (galmada siilka ama dabada).
Ha isku mudin daroogooyin. Isticmaalida silingiyo iyo irbado waa mid khatar ah. Ha u dhiibin silingiyada ama irbadaha dadka kale.
Haddii aad dhiig baxayso ama leedahay dhaawac furan, iska hubso in aanan dhaawacaagu gaarin dhiig kale.
Posted on October 18, 2016 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex